BAGA NAGAYAAN DHUFTE! – Welcome to bilisummaa
BAGA NAGAYAAN DHUFTE!
Birraa 26, 2016
Dhiheenya kana, Juneeydii Saaddoo sab-qunnamtii adda-addaarratti bahee, haala keessa dabree fii gaaffiilee dhihaataniif irratti ibsaa fii deebisaa laachaa jira. Xiqqo duraa fii kaluttiis, seenaa isaa tii fii akkaataa diinaa waliin ykn diinaaf hojjachuu isa muderratti yaada isaa barreeyfamaan ibsee jira. San malees, Birraa 16, 2016, mata-duree Behind the Ethiopia protests: A view from inside the government jattuun, dooyaa internet tan African Arguments irratti, haala mootummaa Wayyaanee keessa ture saaxileessuu fii balaaleeffachuun, yaroon aangoo isaanii raawwachuu itti dhawwaaqee jira.
Ee! Mootummaa hojjataniifii galata nama waakkattu jibbuu fii abaaruun waanuma jiraa ti. Aangoo akka Juneeydii qabaachuullee baatan, warri bulchiinsa mootummaa wayyaanee keessatti sadarkaa adda-addaatti meeshaa tahaafii turanii, eega keeysaa bahanii biyyaa baqatan booda balaaleeyfatan heddu.
Gabroomsaan tokko tin’isa miseensota hawaasaa tiin alatti ummata biyya tokkoo irreen if jalatti bulchuu fii irratti abboomuu hin dandayu. Tooftaan kuni, Wayyaanee, tan ummata biyya Xoophiyaa ja’amtu keeysaa hawaasa dhibbantaa sadii (3%) hin caallerraa (Oromo, Amaara, Afarii fii lammiillee biroo kanneen naannoo Tigraay jattee haqaarratte keeysa jiran odoo hin dabalanne) bu’uramteef haalaan ifaa dha. Kana waan taheef, gaafa Dargiin haala amma isiin keeysa jirtu keeysa seene, ji’a Bitooteessaa tan bara 1990, Oromoota lolarratti boojitee fii kanneen waraana Dargiirraa harka itti kennan, warra Sha’ibiyaa-rraa fudhattee fii ifiif qabdurraa, OPDO dhaabde. Taayyee Tekle Haymaanoot- Kumaa Dammaysaa, Minaasee Walde-goorgis – Abbaa Duulaa Gammadaa moggaafteefii, Abraahim Malkaa, Baqqalaa Dhugaasaa, Geetaachoo Badhaanee, Baacaa Dabalee fii warra biroo irratti ramaddee, if dura oofaa Oromiyaa seente.
Bara 1991, yaroo Wayyaaneen aangoo biyyichaa Dargiirraa fudhattu, Juneeydii, kan waajjira bishaanii kan Magaalaa Finfinne keessatti mindaawaa tureef, qindoominni armaa olii irraa dhokotaa hin turre. Haa tahu malee, girgirii Yaroo Ceehumsaa injifattee akka aangoo tottolfatteen, bara 2000-tti, akka inni ja’utti, “jijjiiramaan fidaan,” OPDO keessaan itti makamee, Onkololeessa 2001, aangoo Preesdantumma (Abbaa Bokkuu ykn Bokkummaa) Oromiyaa muudame.
Ee! Yaroo Juneeydiin OPDO-tti makamu, dhaabichi Wayyanee kuni qaata miseensota gosa lama hore. Isaaniis, warra ittiin bu’ureeffamanii fii kanneen eegas itti dabalamni. Warri eega Wayyaaneen biyya seente OPDO-tti dabalaman iddoo sadihitti qoodamu. Isaaniis, kanneen haala adda-addaarraa hawaasatti dallanuun, qabsoo bilisummaa fii angooma ummata Oromoo dura dhaabbachuu fii lammii miidhuuf diinatti maxxanan; warra dantaaf ykn hujii barbaadaaf dirqamanii itti seenanii fii garii, akka juneeydiitti jijjiirama finnaan itti miseensoomani.
Juneeydiin aangoo qabatee ji’a kurnaffaa, Adooleeysa bara 2002a, haadha tiyya tan araraasni guddisaa tiyyaa fii gadamojjummaa dadhabsiise, tan ji’a sadii booda boqochuuf jiraattuun walitti dhaammachuuf Finfinnee dhaquun dirqame. San dura gaafniniin magaalaa tana abuure, bara kudhan dura, jalqaba bara 1992a ti. Yaroon san, yaroo Mootummaa Ceehumsaa ja’amee beekkamu. Gaafana, dhaaba Tokkummaa Oromoo Amerikaa Bitaa, kan yaroo sanitti Oromoonni Ameerikaa Kaabaa jalatti gurmaawan bakka bu’uun wallisoota sadii waliin dheeynee, mooraa Gullallee tii fii tan qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa, hamma tokkoof, yaroo itti oowwifne ture.
Barri kurnan abuura lameen jidduu jijjiirama guddaa fide. Gaafa kana, Wayyaaneen mootummaa dhunfattee, akkuma aadaa Habashaatti aangoratti wal-loltee, kan moohame caphee, kan mooheef yaroo itti sujuudamaa ture. Gaafa warri OPDO, kan yaroo abuura duraa, eegee khofa kaayyatanii dhodhokochaa turan mootummaa Oromiyaa bulchitan ja’amanii gooba itti baasanii fii, Juneeydii Saaddoo Preesdantii muudame ture. Isa malees, gaafa diinni “mooraa qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa kolaase” je’ee dhaadachaa ture. San qofaa miti, gaafni san, gaafa, ummanni ganna kudhan dura halkanii fii guyyaa galma Gullaallee keessaa waa’ee bilisummaa dhiichisaa turan, mataa gadi-cabsatanii, akka gabrittii tu ja’e ja’anitti, “hamma yaroon naa dhuftuu gabrichi na haa bulchu” itti jachaa turani.
San keeysa, anaa, akkuma warra Gullaalee keessatti dhiichisaa bahanitti faantaa fii sagalee dhooyfachaa jiru, karaa waahelaa tiin, Juneeydii Saaddoo waliin wal-arkuuf ballama qabadhe. Guyyaa baallamaa, dhimma biraatiif ganamaan manaa baheen, ballamaaf sa’aan lama akka hafeen, toora sa’aa 4:00 WB (PM) manatti deebi’e. Yaroon mana dhufu, waahela Juneeydii waliin ballama naaf qabe onneen dhaabbachaa turte.
“Maali, maaltu tahe?” je’een gaafadhe, waahela dallansuun nan lolaa jiru.
“Hamma yoonaa eeysa turte?” Naan je’e.
“Bakka takkaan ture?”
“Ani si eegaa hin turree?”
“Juneeydii waliin ballama siif qabee hin turree?”
“Duuba maaltu tahe?”
“Amma sa’aa meeqa?”
“Sa’aa afuri?” Anaa tu ja’aan.
Akkumaan “sa’aa afuri” je’eeniin dammaqee, koflaa, “ani lakkooysa baraa fii yaroo Habashaa tan adunyaarraa if duubatti hafte eegaan sammuu keeysaa if baase turee bar!” je’een.
Waahelli koo kan haalaan dallane, alasuma Juneeyditti telefoona bilbilee Faranjoomuu kiyya itti hime. Akkasiin, Juneeydiin kan hujiirraa bahe, waajjiratti ol deebi’ee, qoma bal’aan na simatee, wal-barree, yaroo gabaabduuf yaada wal-jijjiirre. Yaroon san, yaroo Wayyaaneen namoota biyya alaa jiran maashoon barbaadaa itti turte tahullee, simannaa naa godherraa haalaa niin gammachuu hore. Akka wal agarreen, wal odeeyfannoo xiqqoo booda, sababniniin bira dhufeef, sab-boonummaa qabaachuu isaa dhagayuurraa kan madde tahuun, sodaa malee, beeysise. Kana kaniin dhagaye, barattoota Oromoo kanneen gaafas Universitii Finfinnee keessatti wal-gurmeeysan irraa hi. Hoogganoonni koree barattootaa kanneeniin qunname, yaroo sanitti, OPDO-n, eebbifamoota waggaa tiif galma bashannanaa fii barruu eebbifamoota waggaa tan maxxanfachaa jiraniif deeggarsa waakkatullee, jara biraarra, Juneeydiin sab-boonummaa xiqqoo qabaachuu naa ibsan.
Duuba, haala sanirraa ka’uun, anaannata lammiif qabu keessatti cimsuuf, faaruun alaa dhagaye eegaan gurra naqe booda, barcumni aangoo kan maqaa Oromoo tiin irra kaayame, kan wareegama qabsaawota Oromoo tiin arkame malee kan Wayyaaneen isa badhaafte tahuu dhaba hubachiise. Inni, gama isa tiin, “biyya alaa teeysanii bu’aan sabaaf fiddan waan hinjirreef koottaa waliin qabsooynaa,” naan je’ee, if na bir’achiise. Haa tahu malee, gaaffi isaa tana “wanni biraa hanqatu, qeerensa daggalaa taa’ee adurree gandoota keeysaa boonsu isiniif taane” deebisaa jattuun jalaa miliqe. San booda, gadhiifamummaa kiyya hubatee, iddoon jirru tan waan feenee fii waan garaa itti haasoynu tahuu dhaba na hubachiisee, waanuma biraa hahaasoynee, adda deemne.
San booda, anaa fii Juneeydiin, takkarra-lama telefoonaan wal’agarree turre. Qunnamtii teenya keeysaa takka tan haala waahela kiyya kan isaan wal na qunnamsiise laaltu. Waahelli koo kuni, gaaf tokko, tooftaa Wayyaaneen Oromoota Dargii waliin turan sodaachisuun mataa gadi cabsachiiftuun baaragee, biyyaa baqachuu barbaaduu isaa natti himnaan, dhimma isaa kanaaf, Juneeyditti bilbile. Juneeydiin, dhiibbaa karaa saniin godhamtu akka beekuu fii hamma ani aangorra jirutti waahela kiyya hamtuun takkalleen akka hin qunnamne natti himee, haala saniin onnee isaa jajjabeeysee, immaammata baqaarraa akkaan hambisu na godhe.
Haalli diinni keeysa jiruu fii sadarkaan murannoo, dandayuu fii dhabuu murteeysullee, dhaaba diinni dantaa isaa tiif dhaabbate keeysa seenanii jijjiiruuf ijibbaachuun waanuma jiraa ti. Garuu, tattaafanni akkasii tokkeen odoo hin taane waloon – murtii ifii tiin odoo hin taane tan gurmuun yo tahe irra wayya. Bu’aallee irra argamsiisa. Yokaan bu’aa lammiif irraa buusanirra tan diinni namarraa buufatuu tu irra caala. Juneeydiin tana hubachuun, gochaa isaa tiin bu’aa ummataaf buuserra tan diinni isarraa buufate caalaa tahuu ibsee jira. Ibsi isaa, warra haala akkasii tiif diinaa waliin hojjachaa jiran, kanneen boru yaada akkasii alaneeffachuuf (sababsachuuf) jiraataniif hubachiisa.
Arra, moraan diinaa qabsoo ummanni Oromiyaa abbaa biyyuummaa isaa mirkaneeffachuuf godhaa jiruun Wayyaaneen jeeqama guddaa keessa seentee jirti. Goobanoota bira taree basaasotaa fii nafxanyoonni isii kanneen qawwee hidhachiiftee lammii keeysa facaafte, rakkoo itti achi deemaa jirtu haala irraa baraaruu hin dandeenye keessa limtee jirti. Sanirratti, murannoon Fayyisaa Leellisaa dhukkuba onnee itti fidee jira. Haala kana keeysa, Juneeydiin, dogoggoraa fii balleeysaa godheen, ummata Oromiyaa fii qabsoo bilisummaa isaaniirratti miidhaa fideef dhiifama gaafachuun as bahuun mooraa qabsoo tiif jabina tan diinaa keessatti ammoo shororkaa biraa akka uumu hin mamu. Kana hubachuun, obboleeysa koo Juneeydiin, akka obboleessi irraa bade deebi’eefitti, gammachuun Baga Nagayaan Dhufteen! ja’aan.
Previous Ethiopian soap star and ’household name’ Zenah-Bezu Tsegaye flees to seek asylum in US
Next “The blood flowing in Oromia is our blood too”: Why Oromo-Amhara solidarity is the greatest threat to the Ethiopian government